I-SPC Smart Ultimate, ukhetho lokwenyani olunoqoqosho kakhulu | Izixhobo zeNdaba
UMiguel Hernandez | 28/03/2022 10:00 | ngokubanzi, Iiselfowuni, Reviews, Umnxeba
Sibuya ne SPC, ifemu ehambe nathi ngohlalutyo oluninzi kwiminyaka yakutshanje, nangona ngeli xesha sinethuba lokubona isixhobo esingeyena umgca weshishini onamandla kakhulu we-brand, kodwa oko akuze kube buhlungu ukukhumbula, sithetha ngee-smartphones.
Sihlalutya i-SPC Smart Ultimate entsha, ukhetho loqoqosho nayo yonke into oyifunayo kubomi bemihla ngemihla kunye nokuzimela okukhulu kwabo banenkathalo ngexabiso.. Fumanisa nathi iimpawu zale terminal entsha ye-SPC kwaye ukuba ngokwenene izibeka njengenye indlela ngokwexabiso layo.
1 Uyilo: Ixabiso kunye nokuqina kwiflegi nganye
3 Amava emultimedia nokuzimela
Uyilo: Ixabiso kunye nokuqina kwiflegi nganye
Okokuqala, sifumana umzimba weplastiki, into eyenzeka kwakhona ngasemva, apho sinesigqubuthelo esenziwe ngesicatshulwa esiphindwe kabini esivumela ukuba sinikeze ukubamba okukhulu kunye nokubonakala, kutheni ungathethi, into emnandi ngakumbi. Fyenziwe ngeplastiki emnyama ecocekileyo ngasemva, Konke ukugqwesa kuhlala kwinzwa kunye nesibane se-LED.
Imilinganiselo: 158,4 × 74,6 × 10,15
Ubunzima: I-195 gram
Indawo ephezulu yejekhi ye-3,5mm isekhona, ngelixa kwindawo engezantsi sinezibuko le-USB-C apho siya kuqhuba iintlawulo. Iqhosha eliphindwe kabini kwiprofayile esekhohlo yevolumu kunye neqhosha elithi "amandla" kwicala lasekunene, ngokombono wam, lingayenza ibe nkulu kancinane. Ifowuni inemilinganiselo emininzi kunye nobunzima obuhamba nayo, kodwa ivakala yakhiwe kakuhle kwaye ibonakala inomgangatho olungileyo wokuchasa ixesha kunye neempembelelo.
Kweyokugqibela sinayo ityala le-silicone elicacileyo lifakwe kwiphakheji, kunye nekhebula lokutshaja, i-adapter yamandla kwaye ngokuqinisekileyo ifilimu ekhuselayo yesikrini esiza efakwe. Uyilo oluvumela ukuba luhambe, olunezakhelo ezichaziweyo kwindawo engaphambili kunye nekhamera "yohlobo lokulahla".
Le SPC Smart Ultimate ikhatshwa iprosesa I-Quad Core Unisoc T310 2GHz, into eyahlukileyo kwinto esiqhele ukuyibona kunye neQualcomm Snapdragon eyaziwayo kwaye kunjalo MediaTek. Yintoni egqithisile, Ikhatshwa yi-3GB ye-LPDDR3 RAM. ukuba kwiimvavanyo zethu ihambe kakuhle kakhulu kunye nezicelo eziqhelekileyo kunye ne-RRSS, nangona ngokucacileyo asinakucela inzame, ngenxa yomthamo, ayinakwenzeka ukuba yenze.
Inefayile ye- IMG PowerVR GE8300 GPU ngokwaneleyo ukuqhuba imizobo yezicelo ezikhankanywe ngasentla kunye nojongano lomsebenzisi, kude nokubonelela ngentsebenzo eyamkelekileyo kwimidlalo yevidiyo elayishwe kakhulu efana ne-CoD Mobile okanye i-Asphalt 9. Ngokuphathelele ukugcinwa, sine-32GB yememori yangaphakathi.
Yonke le seti ye-hardware isebenza kunye ne-Android 11 kuguqulelo olucocekileyo kakhulu, into exatyiswayo, isuka kwezinye iibrendi ezifana ne-Realme egcwalisa isikrini sethu nge-adware, into abo kuni bandilandela ixesha elide babonakala ngathi bayayenza. ndibeyimpazamo engaxolelekiyo.
Oku kuthetha ukuba eweSiza kufumana kuphela izicelo ezisemthethweni zikaGoogle ukuqhuba iNkqubo yokuSebenza kakuhle, kunye nokusetyenziswa okusemthethweni kwe-SPC.
Kwinqanaba loqhagamshelwano siya kuba nalo zonke iinethiwekhi ze-4G eqhelekileyo kwintsimi yaseYurophu: (B1, B3, B7, B20), kwakunye 3G @ 21 Mbps, HSPA + (900/2100) kwaye kunjalo GPRS / GSM (850/900/1800/1900). Sikwanayo GPS kunye A-GPS kunye WiFi 802.11 a/b/g/n/ac. I-2.4GHz kunye ne-5GHz ihamba noqhagamshelwano I-Bluetooth 5.0.
Itsala ingqalelo yethu ukuba siqhubeke nokhetho lwe yonwabela iRadio FM, into eya kukholisa icandelo elithile labasebenzisi ngokungathandabuzekiyo. Ngakolunye uhlangothi, i-tray ekhutshwayo iya kusivumela ukuba sibandakanye amakhadi amabini eNanoSIM okanye wandise imemori ukuya kuthi ga kwi-256GB ngaphezulu.
Amava emultimedia nokuzimela
Sinesikrini 6,1 intshi, i panel IPS LCD enokukhanya okwaneleyo, nangona isenokungaqaqambi kangako kwiimeko zangaphandle ngokukhanya kwendalo okuninzi. Kananjalo inomlinganiselo we-aspect ratio ye-19,5: 9 kunye ne-16,7 yezigidi zemibala, zonke zinika isisombululo se-HD +, oko kukuthi, i-1560 × 720, enika umsebenzisi ubuninzi beepikseli ezingama-282 nge-intshi nganye.
Isikrini sinolungelelwaniso lombala olwaneleyo kunye nephaneli ebonakala inexabiso eliphantsi. Isandi, esivela kwisithethi esisodwa, sinamandla ngokwaneleyo kodwa asinalo uphawu (ngenxa yezizathu ezicacileyo zexabiso).
Ngokuphathelele ukuzimela sinawo a 3.000 mAh ibhetri, nangona ngenxa yobunzima besixhobo besiya kucinga ukuba inokuba ngaphezulu. Asinalo ulwazi malunga nezantya zokutshaja, ukuba songeza kuloo nto ayifakwanga kwibhokisi (nangona ubukhulu bayo) akukho adaptha yamandla, kuba sinesaqhwithi esigqibeleleyo.
Nangona kunjalo, lI-3.000 mAh inika umphumo omuhle ngosuku kunye nesiqingatha okanye iintsuku ezimbini kuthathelwa ingqalelo ubuchule bezobugcisa besixhobo kunye nokuba iNkqubo yokuSebenza icoceke kakhulu, ngoko asiyi kuba neenkqubo ezingenangqondo ngasemva.
Yiba nekhamera yangasemva I-13MP ekwazi ukurekhoda kwisisombululo se-FullHD (ngaphezulu kwesikrini), akukho Imo yoBusuku okanye intshukumo ecothayo. Ngokwenxalenye yayo, ikhamera yangaphambili ine-8MP yee-selfies ezingaphezulu ngokwaneleyo. Ngokucacileyo, iikhamera zale SPC Smart Ultimate ngokuhambelana nexabiso layo eliphantsi kwaye injongo yayo ayikho enye ngaphandle kokukwazi ukwabelana ngomxholo othile kwiiNethiwekhi zeNtlalo kwaye usikhuphe enkingeni.
Le SPC Smart Ultimate Inexabiso le-euro ezili-119 kuphela, kwaye andazi ukuba kufuneka ube nenye into engqondweni. Kuncinci okufunekayo kwitheminali exabisa kancinci. Sizifumana sinomsindisi wobomi, ifowuni esivumela ukuba senze iifowuni kwiimeko ezilungileyo, sisebenzise umxholo we-multimedia kwiiplatifomu eziphambili ngaphandle koluphi na uhlobo lwe-stridency kunye nokunxibelelana nabantu esibathandayo ngokusebenzisa izicelo ezithandwa kakhulu, akukho nto.
Ibonelela ngehardware ekuphakameni kwexabiso, ikhuphisana ngokuthe ngqo noluhlu lweRedmi lweXiaomi, kodwa isinika amava acocekileyo ngokupheleleyo, ngaphandle kwabalamleli, intengiso okanye izicelo ezingeyomfuneko. Nokuba ufuna ifowuni yabantwana abancinci, abantu abadala, okanye isixhobo nje sesibini sokusindisa ubomi, le SPC Smart Ultimate ikunika kanye into oyihlawulayo.
Ithunyelwe nge: 28 Matshi we2022
I-OS ecocekileyo ngokupheleleyo
indawo yolawulo yiHD
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-SPC Smart Ultimate, ukhetho lokwenyani olunoqoqosho kakhulu